Muchengeti wehove: mutambo wekutanga wakaburitswa ... uye unotaridzika zvakanaka | Linux Vakapindwa muropa
Muchengeti wehove: mutambo wekutanga waburitswa
Muchengeti wehove Haisi imwe yeaya akajairwa mavhidhiyo emitambo mazita. Icho chimwe cheicho chinowanikwa izvo, nekuti chiri chechokwadi, chinowanzochida uye chine vateereri vayo. Mune ino kesi, iwo wakasununguka kwazvo mutambo wevhidhiyo une chekuita nenyika yetangi matangi. Parizvino yaizosvika yeWindows, asi vagadziri vayo vanoda chiteshi cheLinux icho chinogona kusvikawo paStam muna2021.
Vagadziri vari kutarisira kusimudzira vari Blinkclick Mitambo, Krakow-based studio. Uye izvo zvavanoda nazvo kugadzira iyo nharaunda yakanakira vanofarira aquarium, nemubatanidzwa wezano rezvehupfumi uye kuenzanisa kwehupenyu. Ndokunge, iwe unopinda muchinzvimbo chemu aquarist anotarisira hove dzako, uye iwe unogona kuve nedziva-rakavakirwa dziva.
Kwechinguva, iwe unofanirwa kugadzirisa ona vhidhiyo iyikana neicho chinogona kuve Muchengeti weHove, uye ndinovimba kuti ma studio anowana chiteshi nekukurumidza.
Sezvauri kuona, kuwanda kwezvinhu zvinogona kuitwa, kuti ungatenga sei yekutanga tangi remvura, zvakare kuwedzera kwayo, uye kushongedza. Uye izvo zvinosanganisira kutengwa kwemidziyo, substrates, zvinomera zvemumvura, makorari, hove dzemhando dzakasiyana, hozhwa, shrimp nezvimwe. Zvese zvekuti hove dzinogona kurarama, kunyangwe iwe uchigonawo kuzvitengesa uye kuwana mari yekugadzirisa zvimwe ...
Panguva yemutambo iwe unenge uchingogara uchiteerera kune akawanda marariro ekuzorora nemumhanzi izvo zvinokuita kuti unyurwe mune nyarara kwazvo.
Nenzira, kunyangwe vhidhiyo yacho yatotaridzika kunge yakanaka, zvinofanirwa kutaurwa kuti vagadziri vayo vanga vachingo shanda kwemavhiki mashoma, saka vhezheni yeVachengeti veHove yavanomhanya iri mangwanani, pre-alpha. Nekudaro, izvo zvakakwana kuratidza ma mechanics emutambo uye kuwana zano rekuti chii chichava.
Uye ... kana iwe uchida izvo zvaunoona izvozvi, iwe unogona kuwedzera Fishkeeper kune iyo chinyorwa chekuda de chiutsi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Muchengeti wehove: mutambo wekutanga waburitswa
CentOS Stream: chii uye chii chaunoda kuziva